ကာရံမဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ ဘ၀.................
ကျွန်တော် သိတတ်စအရွယ်မှစ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် ကျွန်တော် ကောင်းမှုကုသိုလ် အလှူအတမ်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ လှူဒါန်း ခဲ့ရာတွင် အမှန်တကယ် အကူအညီ လိုအပ်သည့်နေရာ၊ တကယ့်ကို ကူညီသင့်သည့် နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်က ရှားသည်။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကိုယ်ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဘုရားတွင် လှူသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် လှူသည်.။ ဒုက္ခရောက်နေသူ၊ အမှန်တကယ် အကူအညီလိုနေသူများကို လှူဖို့ မစဉ်းစားမိခဲ့.။
ကျွန်တော်... လူမှုရေးအကူအညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အားကျသည်.။ စိတ်ရင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူမိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ များစွာလိုလားသည်. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ခွင့်ရချင်သည်.။ ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် အားမရသည်က ကျွန်တော် ဘာကြောင့်များ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မပါဝင်နိုင်သည်ကိုပင်.။ အချိန်မရှိလို့လားဆိုရအောင် အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော် အဲလောက်အလုပ်ရှုပ်သူမဟုတ်.။ ကကယ်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က စိတ်အားမထက်သန်လို့များလား.?
ရေးသားသူ - ကာရံမဲ့ ၊ အချိန် 1/19/2012 07:56:00 PM0မှတ်ချက်
ကဏ္ဍ - ခံစားမှု
Celebrity Favorite မှာ ပြောခွင့်မရှိပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Blog မှာတော့ ကိုယ့် Favorite တွေကို ပြောခွင့်ရှိပါတယ်နော်.။ ဟဲဟဲ.. ဒါဆိုစပြီနော်.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့.. ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ဘာတွေ ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ... အကြိုက်တွေက အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့လေ.. အခုလက်တလောတော့ အစားအစာဆိုရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပဲ စားဖြစ်နေတယ်.. (ကြိုက်၍တော့မဟုတ်ပါ. ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေကြောင့်သာ) အသားတွေ စားချင်စိတ်မရှိဘူး... ထမင်းစားပြီးတိုင်းတော့ အသီးတစ်ခုခု စားဖြစ်တယ်ဗျ (စိတ်ကူးထဲတွင်..) ကျွန်တော်က ထမင်းစားရတာထက် အဲလို အသီးတွေ စားရတာ ပိုကြိုက်တယ်.။ မနက်စာဆိုရင် ပေါင်မုန့်နဲ့ ကြက်ဥကြော်ရယ်. ကော်ဖီရယ်. ဒါပဲစားဖြစ်တယ်.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ Season က ချိစ့်ပေါင်မုန့်နဲ့ သီးစုံဒိန်ချဉ် အမြဲသောက်ဖြစ်တယ်. (ဈေးအနည်းဆုံး ဖြစ်ပါသဖြင့်) ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်ဗျ.။
Cosmetics တွေဆိုရင် NIVEA Set လိုက် သုံးဖြစ်တယ်. ကျွန်တော် အသားအရေနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ. ပြီးတော့ အနံ့ကိုလဲ ကြိုက်တယ်. (စကားလှအောင် ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.။ အမှန်မှာ တန်းဖိုးအားဖြင့် သင့်လျော်ခြင်း ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။).. ရေးမွှေးကတော့ Rico အစိမ်းကို စွတ်ဖြစ်နေတယ်. အနံ့လေးက တော်တော် အဆင်ပြေတယ်. လူကို Fresh ဖြစ်စေတယ်. နောက်ပြီတော့ L’afair.. ဒီကောင်ကတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထာတာ. ဒါကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်. ဒါပေမယ် သူက Fresh ဖြစ်တဲ့ အနံ့ တော့မဟုတ်ဘူးဗျ… ခေါင်းလိမ်းဆီကတော့ CODE 10 Moisturising ကို သုံးဖြစ်တယ်..
အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က Electronic ပစ္စည်းတွေကို သဘောကျတယ်.. ပထမဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် SONY DSC-W310 Digital Camera အိန္ဒိယရောက်တုန်းက ဝယ်ခဲ့တာ. ဒီကောင်းလေက ကျွန်တော် ခရီး သွားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီကောင်းလေးက မရှိမဖြစ်ပဲ. ကျွန်တော့ရဲ့ Favorite အဖြစ်ဆုံးပစ္စည်းပေါ့ဗျာ. နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော့ရဲ့ ဒီ Laptop လေး… Lenovo 3000 G430.. ဒီအထဲမှာဆို ကျွန်တော ရိုက်ခဲ့သမျှ ဓာတ်ပုံတွေ. ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေ အားလုံးထည့်ထားတယ်. ပျင်းရင် ဖွင့်ပြီး တစ်နေ့လုံး ဒါလေးနဲ့ပဲ အဖော်ပြု ဖြစ်တယ်.။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဖုန်းပါ. Acer beTouch E120 မော်ဒယ်. ဒီကောင်က ကျွန်တော် ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တုန်းက ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာ.. (ထိုင်းဆိုပြီး အထင်မကြီး လိုက်ပါနှင့် ရွာသာသာ ရှိသော နယ်စပ်မြို့ ရနောင်းကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။) Android 2.1 ၊ သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်. လိုင်းဆွဲအားလည်း ကောင်းတယ်.. သီချင်း နားထောင် ရတာလဲ အဆင်ပြေတယ်.. ကျွန်တော်မှာ မရှိသေးဘူး.. အရမ်းလိုချင်နေတဲ့ ပစ္စည်းကတော့ Lenovo Tablet K1.. ကျွန်တော် အရမ်း လိုချင်နေတယ်.. ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံ မလောက်သေးဘူးဖြစ်နေလို့.. ဘယ်လို ကြံရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစား နေတယ်.
အဝတ်အစား နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ထွေထွေထူးထူး မရှိဘူးဗျ. ရုံးသွားရတာ များတော့ စတစ်အဖြူနဲ့ ပုဆိုပဲ ဝတ်တာများတယ်။ ဖိနပ်ဆိုရင်လဲ ကတ္တီပါ ဖိနပ်ပဲ စီးဖြစ်တယ်.။ တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင် ထွက်ဖြစ်ရင်တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စတိုင်ကိုပဲ ဝတ်ဖြစ်တယ်. Accessories ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် နာရီ. လက်တလော ပတ်ဖြစ်နေတာကတော့ DM ပါ. ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်တယ်ပြောတာနဲ့ မလဲဖြစ်သေးတာ.။ (မဟုတ်ပါ. အသစ် မဝယ် နိုင်းသေး၍သာ.) နောက်တစ်ခုကတော့ မျက်မှန်. ပါဝါရော နေကာရော တပ်ရတယ်. ရုံးသွားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လျှောက်လည်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီကောင့်ကို မတပ်လို့မဖြစ်ဘူး.။
အခုဆို ကျွန်တော် အကြိုက်တွေ ဖော်ပြပေးသွားတာ တော်တော်လဲ စုံသွားပြီ ဖြစ်လို့ အားလုံးလဲ ကျေနပ် ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.။ အားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ကျွန်တော်ရဲ့ Blogger Favorite Post လေးကို ဒီတင်ပဲ အဆုံးသတ်ပါရစေခင်ဗျာ. အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ရေးသားသူ - ကာရံမဲ့ ၊ အချိန် 10/19/2011 07:47:00 PM0မှတ်ချက်
ကဏ္ဍ - စာတို
ဖြစ်ပြီးသမျှ ပြန်ပြင်လို့မရသလို အနာဂတ်ကိုလည်း ဖန်တီးလို့မှမရနိုင်တဲ့အတွက် လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် မှာပဲ ကောင်းအောင်နေရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကိုမှ စိတ်ညစ်မနေဘဲ စိတ်ကို အရှင်းဆုံးနဲ့ အဖြူစင်ဆုံး ထားလိုက်နိုင်ရင် ဘဝဟာ သာယာပျော်ရွှင်နိုင်မှာ အသေချာပါပဲ။
ရေးသားသူ - ကာရံမဲ့ ၊ အချိန် 10/06/2011 07:19:00 PM 1 မှတ်ချက်
သာမန် ၁၄ ရက်နေ့
သေဆုံးပြီးတဲ့ အချစ်တွေဟာ ပြန်လည် ရှင်သန်ဖို့ ခက်ခဲတာလား.။ ဒါမှ မဟုတ် ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချစ်ကို မေ့လို့မရနိုင်တာလား.။ သေချာ ရေရာတဲ့ အဖြေကို မသိ ပေမယ့်.. ချစ်ခဲ့သူ တစ်ယောက် အကြောင်းကို တွေးမိတိုင်း ဒီရင်ဘက်ကြီးက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက် တစ်ခုကို ခံစားမိနေတယ်.။ မဖြစ်နိုင်တာ သိသိကြီးနဲ့ မျှော်လင့်မိတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ရူးမိုက်မှု....။ တစ်ခါ တစ်ခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးရင်း အတွေးတွေနဲ့ လမ်းဆွေး နေတဲ့ ကျွန်တော်.။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်အဖို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဆိုတာ သာမန် နေ့လေး တစ်နေ့ကို ကုန်ဆုံးသွားမှာပါပဲလေ.။
ရေးသားသူ - ကာရံမဲ့ ၊ အချိန် 2/11/2010 09:57:00 PM4မှတ်ချက်
အပြောင်းအလဲ များစွာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ လောကကြီးကို တစ်ခါ တစ်ခါ စိတ်ပျက် လာမိတယ်.။ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်တွေ.. မထင်မှတ်တဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေဟာ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ငါ့ဘဝကို လှုပ်ခါစေခဲ့တာ...။ တစ်ခါ တစ်ခါ ကိုယ်ပြော လိုက်တဲ့ စကား တစ်ခွန်းအတွက် သူများ ရင်မှာ ခံစားမှု တစ်ခု ဖြစ်သွားစေခဲ့ သလိုပဲ. သူတို့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ ငါ့ကို လှုပ်ခါ သွားစေခဲ့တယ်.။ တစ်ခါ တစ်ခါ ငါ့ဘေးမှာ အားပေးဖော် အပေါင်းအသင်းတွေ ရှိနေပေမယ့်. တစ်ခါ တစ်ခါ ငါတစ်ယောက်တည်း ဝမ်းနည်း နေရတတ်တယ်.။ တစ်ခါ တစ်ခါ ငါ ဟပ်ဟပ် ပတ်ပတ် ရယ်ခဲ့ရ ဖူးသလို တစ်ခါ တစ်ခါ ရင်ကွဲမတတ် ငိုခဲ့ရဖူးတယ်.။ တစ်ခါ တစ်ခါသော နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်ကျော် ရင်းနဲ့ပဲ ငါဟာ . . . . .
ရေးသားသူ - ကာရံမဲ့ ၊ အချိန် 1/22/2010 06:33:00 AM5မှတ်ချက်
လူတွေထဲက လူဆိုပေမယ့် လူအများစုနဲ့ ကွဲပြားနေပါတယ်.။ ဆန့်ကျင်တဲ့ အမြင်တွေ မရှိပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဘ၀နဲ့..........
2009 - ကာရံမဲ့. Powered by Blogger